NKECHI,NỌỌSỤ ONYE BRITENU RỤRỤ ỌRỤ N’ALAIGBO – hoo!haa!!
LỌNDỌN: Uche Anyanwagụ, nwa-afọ Abịa Steeti akọọla akụkọ etu o siri zute nwanyị onye rụrụ ọrụ n’Abịa Steeti iri afọ atọ n’ise gara aga n’ụlọ ụka na Lọndọn.
Uche kọwara sị,
Ka a gbasara ụka,madụ si n’azụ kpatụ m’ aka m’ were tụgharịa. A hụrụ m’ nwanyị onye ọcha kataworo ahụ nọ n’oche ndi ngwụrọ. Ihe tụzịrị m’ n’anya bụ na ọ sụụrụ m’ Igbo. “Ị bụ onye Igbo?” E kpoghepuru m’ ọnụ na-ele ya tupu m’ jisike kwezie n’isi.
Nwanyi ahụ kọwaara ya na ya rụrụ ọrụ nọọsụ n’obodo ya bụ Itumbuụzọ, Abịa Steeti iri afọ atọ n’ise gara aga.
Mgbe ahụ echiche ya bụ nwoke laghachiri azụ na ihe mere oge gara. Akpata oyi zuru ya ahụ, o wee jụọ nwanyị ahụ sị, “Ị bụ Nkechi Rosalind Colewell?”. Ọ zara ya “Ee”.Anya mmiri juru ya anya. Nwoke bịazịrị gbatazịrị sekpuru n’ihu ya ma makụọ ya.
NKECHI ROSALIND COLEWELL bịara Ụzụakọlị n’Abịa Steeti dịka nwa agbọghọ nọọsụ were rụọ ọrụ n’ogige Ndi Ekpenta dị ebe ahụ.
O metụrụ ya na mmụọ bụ etu ụmụaka ndi isi ezuchaghị oke si awagharị n’enweghị onye enyemaka.
O bidoziri Ogige Ndi isi ezughi oke n’Amaudo, Itumbaụzọ were gazuo Abịa Steeti nile were kpọrọ ụmụaka ndi dị otu kpọga ebe ahụ, ebe eleruru ahụike ha anya, kuzie ha ọrụ aka ma hụkwa na ha laghachiri azụ bụrụkwa ndi ọha obodo nabatakwara.
Ọ dị mwute na ọdachị dakwasịrị ya bụ “Mụọ ọma” Chineke zitere ịrụ ọrụ n’Ala-Igbo. Ọ dazịrị ọrịa nke butere ya nkpọnwụ ahụ(stroke). E bughachịrị ya Mba Britenu n’agbanyeghị na ọ chọghị ịla.
Otu o si asụsi Igbo ike bụ ihe ịtụnanya. Nwanne ya nwanyị kọwara na Nkechi ka na-erikwa nri Ndigbo ma nwekwaa mmasị ịlaghachi Ala-Igbo.
Ndi obodo ahụ ebe ọ rụrụ ọrụ bara ya Nkechi ma chikwaa ya echichi, ndi ụka Methodist chikwara knight.
Udiri ọrụ Nne Teresa rụrụ na Calcutta, Indịya ka Nkechi Colewell rụkwara n’Itumbuụzọ, Abịa Steeti. N’ihi ya, o kwesịrị ka akpọlite ya n’ọkwa dịka onye dị nsọ ka ọ bụrụzịa Nkechi Colewell dị asọ.
hoo!haa!! na-eweliri ochiedike NKECHI COLEWELL aka elu. Leenu ka nwanyị onye ọcha laghachiworo ala bekee si asụsị igbo ike ebe ọtụtụ ihere ịsụ igbo na-emezi ndigbo bi n’Ala-Igbo, ndi ụfọdụ n’ime ha erubeghi Legọsị ma fọdụzịa ịga ala bekee
Previous Post: “NDI ỌCHA NNA HA DỊ OJI” ALỌHACHITELA ALA IGBO, ALA NNA HA!!!
Next Post: CHI, CHUKWU, ECHI
Ewo, akuko nke a metukwara m n’ahu.